हामी ब्लगिंगलाई माया गर्छौं ... तर ... | Martech Zone
हामी ब्लगिंगलाई माया गर्छौं ... तर ...
सोमबार, सेप्टेम्बर 5, 2011 शनिबार, अक्टोबर 18, 2014 Douglas Karr
क्षेत्रीय, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बनाउने जस्तो तपाईलाई अफिसबाट टाढा राख्नको लागि त्यस्तो पर्याप्त छैन र तपाईको सीप सिक्नुहोस्। अवश्य पनि, यात्रा बजेटहरू कडा छन् र भाग लिनको लागि बजेट पनि अवस्थित छैन। मा DK New Media, हामी ड्राइभि distance् दूरीमा सम्मेलनहरूको फाइदा लिन्छौं ... डेट्रोइटदेखि शिकागोदेखि लुइसभिल सम्म, हामी आफ्ना पाठकहरूलाई भेट्ने अर्को अवसरको लागि सधैं ध्यान दिन्छौं।
एक उपकरण जुन उपकरणको रूपमा रहेको छ Lanyrd। Lanyrd तपाइँको नेटवर्क मा मान्छेहरु को उपस्थित हुन को लागी योजना को घटना को एक विस्तृत सूची प्रदान गर्नमा आश्चर्यजनक छ! सबै भन्दा राम्रो, यो नि: शुल्क हो! यदि तपाईं घटनाको प्रमोटर हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो सम्मेलन उपकरणमा थप्न सक्नुहुन्छ! अर्को केही महिनाहरूमा हामी पेरिस, फ्रान्सको बीच लस एन्जलस, क्यालिफोर्निया बीचको कार्यक्रमहरूमा यात्रा गर्ने योजना गर्दैछौं। यदि तपाईं घटनामा हुनुहुन्छ भने, रोकिनुहोस् र च्याट गर्न नबिर्सनुहोस्!
टैग: ब्लगिंगघटनाहरूएउटा सम्मेलन खोज्नुहोस्घटना खोज्नुहोस्मार्केटिंग सम्मेलनहरू
LucidChart को साथ सहयोगी फ्लोचार्टहरू
Re कारण किन पर्यटकहरूले तपाईंको साइट छोड्छन्